Weerar lagu laayey ciidamo katirsan laamaha ammaanka Tunisia - BBC News Somali
8 Luulyo 2018
Image caption Tunisia
Ugu yaraan lix xubnood oo katirsan laamaha ammaanka dalka Tunisia ayaa lagu dilay weerar ay kooxo mintidiin ah kasoo qaadeen Waqooyi-bari dalkaas oo ah soohdinta uu la wadaago dalka Algeria.
Wasaaradda arrimaha gudaha Tunisia ayaa weerarka ku tilmaantay in uu ahaa mid argagixiso.
Laamaha amaanka iyo kuwa gaashaandhigga dalkaas ayaa si goos goos ah ula kulmayey weeraro dhiig badani uu ku daatay oo noocaan oo kale ah lixdii sano ee u dambaysay.
Waa tiradii dhimasho ee ugu badnayd ee laamaha ammaanka Tunisia ee hal weerar ku dhimata tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2015.
Weerarka gaadmada ah ee maanta ee ka dhacay waqooyi-bari dalkaas oo ah xuduudka uu la wadaago dalka Algeria ayaa lagu dilay lix katirsan laamaha ammaanka sida lagasoo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha.
Wakaaladda wararka dawladda ee TAP ayaa weerarka ku sheegtay in uu ahaa miino dhulka lagu aasay oo lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo roondo ka samaynayey magaalada Gar Dimaou, ee gobolka Jendouba.
Tuniisiya oo dalkeeda ka mamnuucday diyaaradaha Emirates
Lixdii sano ee lasoo dhaafay waxaa jiray weeraro yaryar oo lagu qaadayey laamaha ammaanka ee ku sugan meelaha miyiga ah ee dalkaas, oo ay kujiraan xarumaha xuduudaha kuyaal ee gobolka Jendouba.
Ilaa iyo hadda majirto cid sheegatay masuuliyadda weerarka maanta dhacay, balse qaar kamid ah maleeshiyaadka ka hawgala dalkaas ayaa isugu jira kuwo xiriir la leh Alqaacidada galbeedka Islaamka, iyo kuwo taageersan kooxda isugu yeerta dawladda Islaamka
Sanadkii hore, taliye sare oo ka tirsan maleeshiyada Okba bin Nafaa, ayaa waxaa dilay ciidamada gaarka u tababaran ee Tunisia.
Weerarada iyo iskudhacyada goosgooska ah ee u dhexeeya laamaha ammaanka iyo kooxaha mintidiinta ah ayaa ka dhaca qaybo kamid ah deegaanada miyiga ah ee dalka Tunisia kuwaas oo socday dhowr sano, wuxuuna u muuqdaa loollan muddo dheer socon doona oo u dhexeeya dawladda iyo mintidiinta xagjirka ah.